देश/ विदेशको समाचारः एचकेनेपाल डट कम » प्लमस्टिडमा आयो तिहार
प्लमस्टिडमा आयो तिहार
लण्डन, नेपालीहरुको रमाइलो गर्ने पर्व तिहार नजिकिंदै गर्दा साउथ इष्ट लण्डन क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरुले पनि तिहार पर्व मनाएका छन्। Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
प्लमस्टिडस्थित सेन्ट प्याट्रिक हलमा शनिबार भेला भएका नेपालीहरुलाई यसरी रमाइलो गर्ने मौका भर्खरै खुलेको संस्था हिमालयन अर्गनाइजेशनले मिलाइदिएको थियो।
कार्यक्रममा रमाइलो गर्न भेला भएका नेपालीहरुले कौडा, तास, त्रिपासा, लङ्गुर बुर्जा लगायत खेल खेलेका आयोजक भरत थापाले जानकारी दिए। पहिलो पटक आयोजना गरिएको यो कार्यक्रमलाई आउंदा दिनहरुमा पनि निरन्तरता दिइने आयोजकले बताएका छन्। भेला भएका महिला, पुरुष तथा केटाकेटीहरु सबैजना आआफ्नै तालमा रमाइरहेका थिए।
सो अवसरमा स्थानीय कलाकारहरुले नाचगान गर्दै नजिकिएको तिहारलाई निम्ता दिए। कलाकारहरु रोशनी थापा, रीना थापा, रोना, श्रवण, सुदीप, आकाश लगायतले विभिन्न गीतमा नाच देखाएका थिए।
कार्यक्रमको संयोजन तीर्थ थापा, पदम थापा, थर्क राना लगायतले गरेका थिए। अन्त्यमा उपस्थितहरुले विभिन्न गीतमा ककटेल डान्स गरी तिहार पर्वलाई मनोरञ्जनात्मक बनाए।
आज घरघरमा फूलपाती भित्राइँदै
आज भाई टीका मनाईदै
सुरू भयो छठ पर्व
चारदिने फिल्म महोत्सव सम्पन्न
पोखरा खेलकुद महोत्सवः कसले केमा जिते?
चार्ल्स शोभराजसंग सेक्स गरेकी छैन- निहिता विश्वास
लिगलिगे दौड सम्पन्न